चितवन कांग्रेस अधिबेशन : सभापति पदका लागी ५ जना चुनाबी मैदानमा , कुन उम्मेदवारलाई कसको समर्थन ! | शुभयुग
चितवन कांग्रेस अधिबेशन : सभापति पदका लागी ५ जना चुनाबी मैदानमा , कुन उम्मेदवारलाई कसको समर्थन !
शुभयुग संवाददाताप्रकाशित मिति: २०७८ फागुन १९, बिहिबार (४ महिना अघि)
चितवन – पटक – पटक स्थगित हुँदै आएको नेपाली कांग्रेस चितवनको १४औं जिल्ला अधिवेशन आज बिहीबारबाट सुरु भएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय महाधिवेशन अगावै हुनुपर्ने जिल्ला अधिबेशन जिल्ला सभापति जितनारायण श्रेष्ठका कारण पटक पटक स्थगित हुँदै आएको थियो । यद्धपी आपशी सहमती पछी आजदेखी जिल्ला अधिवेशन सुरु भएको हो । नारायणगढमा हुने अधिवशेनले सात पदाधिकारीसहित ४८ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ । अधिवशेनले जिल्लाका तीन निर्वाचन क्षेत्रबाट ११ जनाका दरले ३३ महासमिति सदस्यको चयन गर्नेछ । क्षेत्र न. ३ बाट भने महासमिति सदस्य चयन भैसकेका छन् ।
जिल्ला सभापतिका लागि हालसम्म ५ जनाले आकांक्षी छन् । सभापतिका लागि उत्तम जोशी, सूर्यकान्त घिमिरे, कैलाश कोइराला, राजेश्वर खनाल र मिलनबाबु श्रेष्ठ चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । जोशी हाल जिल्ला सचिव हुन् । घिमिरे नेविसंघका पूर्व जिल्ला सभापति, कोइराला जिल्ला उपसभापति हुन् । त्यस्तै खनाल महासमिति सदस्य हुन् भने श्रेष्ठ बागमती प्रदेशसभा सदस्य एवम् प्रदेशमन्त्रीसमेत हुन् । उता महाधिबेशन प्रतिनिधीहरुका अनुसार खनाल सवैभन्दा बलिया दाबेदार मानिन्छन् ।
उता सभापति पदका लागी आकाक्षींहरुको संख्या बढेपछी संख्या घटाउन नेताहरू तिब्र छलफलमा छन् । अहिले कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरुसमेत चितवन आएर आ आफ्ना पक्षलाई जिताउन लबिङ थालेका छन् । चितवन कांग्रेसको सबैभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएको जिल्लासमेत हो । सोही कारण केन्द्रीय नेताहरूले यसलाई विशेष महत्त्व दिने गरेको काँग्रेस नेताहरु ताँउछन् ।
चितवनमा तुलनात्मक रुपमा कमजोर मानिएको देउवा पक्षबाट सभापतिको एक मात्रै उम्मेदवार मिलनबाबु श्रेष्ठ हुन् । बाँकी सबै पौडेल – कोइराला पक्षका हुन् । रामचन्द्र पौडेलका उम्मेदवार सूर्यकान्त घिमिरे हुन् भने, उत्तम जोशीले आफू शशांक कोइराला पक्षको आधिकारिक उम्मेदवार भएको बताउँदै आएका छन् । कैलाश र राजेश्वर खनालले पनि आफूलाई कोइराला पक्षको भन्छन् । जिल्लामा पूर्वसभापतिहरूको समूह कतातर्फ लाग्छ त्यसतर्फ नै जितको सम्भावना देखिन्छ ।
संस्थापन इतरका उम्मेदवार मध्य एक बनाउन गृहकार्य भइरहेको छ । सभापति निर्वाचित हुनका लागि ५१ प्रतिशत मत आवश्यक पर्छ । पहिलो चरणमा ५१ प्रतिशत मत ल्याउन नसके दोस्रो चरणमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने दुई जनाबीच पुनः मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दुई हजार ९०६ मतदाता छन् । शुक्रबार मनोनयनको कार्यक्रम सम्पन्न गरी शनिबार मतदान प्रक्रिया अघि बढाइने निर्वाचन समितिका संयोजक ज्ञानेन्द्रप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।